SPL Ngwaahịa: Industrylọ ọrụ fotovoltaic
A na - enweta ike nke foto foto site na ịgbanye ìhè anyanwụ na ọkụ eletrik site na iji teknụzụ dabere na mmetụta fotoelectric. Ọ bụ ụdị nke ume ọhụrụ, enweghị ike ịmị amị na nke na-enweghị mmetọ nke nwere ike imepụta na nrụnye sitere na obere ndị na-ewepụta ihe maka iji onwe ha na nnukwu osisi fotovoltaic.
Agbanyeghị, imepụta Panels ndị a bụ usoro kpụ ọkụ n'ọnụ, nke na-eji oke ume ike.
Ihe niile na-amalite site na akụrụngwa, nke dị na anyị bụ ájá. Imirikiti ogwe igwe na-eme silicon, nke bụ isi ihe dị na aja aja. Silicon dị n'ụba, na-eme ka ọ bụrụ ihe nke abụọ kachasị dị n'ụwa. Agbanyeghị, ịtụgharị ájá n'ime sịlịkọn dị elu na-abịa na ọnụ ahịa dị elu ma bụrụ usoro kpụ ọkụ n'ọnụ siri ike. A na-emepụta sịlịkọn dị ọcha site na quartz ájá na nnukwu ọkụ dị ọkụ na nnukwu okpomọkụ.
A na-ebelata ájá quartz na carbon na ọkụ ọkụ ọkụ na okpomọkụ> 1900 Celsius C na silicon.
Ya mere, n'ikwu okwu, achọrọ nnukwu ihe dị mkpa na ụlọ ọrụ a. Na mgbakwunye jụrụ oyi dị irè, ogo mmiri dịkwa mkpa ebe ọ bụ na adịghị ọcha ga-ebute mgbochi na ọkpọkọ jụrụ oyi.
Na ogologo oge echiche, nkwụsi ike nke ụlọ elu ikuku na-emechi emechi dị elu karịa mgbanaka ọkụ ọkụ. Ya mere, SPL na-atụ aro na ngwakọ oyi kpamkpam dochie emeghe jụrụ ụlọ elu na okpomọkụ Exchanger.
The nnukwu dị iche iche e ji mara n'etiti SPL ngwakọ oyi na mechiri emechi circuit jụrụ ụlọ elu na ndị ọzọ jụrụ ụlọ elu bụ: Tinye n'ọrụ esịtidem Exchanger nke jụrụ ụlọ elu dị iche iche jụrụ mmiri maka akụrụngwa (maka n'ime mmiri) na obi jụrụ mmiri jụrụ jụrụ ụlọ elu (elu mmiri) iji hụ na jụrụ mmiri dị ọcha mgbe niile maka ihe nkedo ma ọ bụ akụrụngwa kpo oku. N'okwu ahụ, ọ dị mkpa naanị ihicha ụlọ elu jụrụ oyi karịa pipụ mmiri na akụrụngwa mmiri niile.